Marka hore sii daayay sanadkii 2011, iCloud waa Apple ee version daruur oo awood u isticmaala in ay sii files synced dhexeeya iPhone, Mac, iPad iyo iPod taabto. Marka laga soo tago simaha si ay gurmad aad iPad ama iPhone, iCloud sidoo kale ka shaqeeya by badbaadinayo aad jadwalka, xiriirada. Laga soo bilaabo OS X Mavericks iyo macruufka 7, caanuhu sirta kasta user ee synced dhexeeya Mac iyo macruufka. Inkastoo iCloud uu u dhigmo adeegyada daruur kale sida WordPress, Google Drive, iyo Microsoft ee SkyDrive ay is-dhexgalka qoto dheer la OS X iyo macruufka siinayaa sifooyinka gaarka ah,. Nasiib darro, waxay u muuqataa in dadka isticmaala badan oo maanta Apple ee adeega iCloud haysato arrimaha la madal.
Top 10 dhibaatooyinka iyo xalalka ku saabsan iCloud on iPhone
Caddadka # 1: The hagaagsan iCloud uusan si sax ah u shaqeeyo
Tufaax ah adeeg iCloud sida caadiga ah waa si degdeg ah, oo deggan oo lagu kalsoonaan karo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah dhibaatooyinka kaas oo looga hortago MobileFamilyTree ama MacFamilyTree ka syncing faraca qoyskaaga.
Common iCloud nidaameed Dhibaatooyinka
Xitaa haddii iCloud ahaa OS X Yosemite, waxa sheegay "Fadlan sahlo iCloud."
Si aad u awood qalabka oo dhan iyo nidaamka aad Mac, OS X Yosemite isticmaalaa cusub iCloud Drive. Si ka duwan macruufka 8, ogow in aysan u leeyihiin waafaqsan iCloud hore magacaabay. Marka xisaab iCloud ayaa la casriyeeyay si iCloud Drive, ma aha in ay u hagaagsan qalab kale oo aan ku taageeri doonaa ama isticmaal iCloud Drive. Si kastaba ha ahaatee, habkan lagu beddeli karo.
Ka dib markii isku day badan "Ma awoodo in uu bilow iCloud nidaameed."
Haddii aad haatan socda LogTen Pro 6.5.x, laakiin waxa uu leeyahay qorshayaal u casriyeeyo si macruufka 8 ama OS X Yosemite, fadlan ka heli bogga: LogTen Pro 6 & iCloud Drive
Xanniban ee "biirtay leesin ah ee iCloud."
Iyadoo ku xiran baaxadda leesin, habka qaadanayaa ilaa 15 daqiiqadood haddii aad isticmaasho iCloud qalabka kala duwan in ay leeyihiin logbooks weyn. Xitaa haddii aad horay u isticmaali WiFi nidaameed, u hagaagsan oo buuxa waa lagama maarmaan si loo xaqiijiyo entries oo dhan.
Xogta ka leesin kama muuqan aaladaha kale ee
Isku day in aad sugto muddo 15 daqiiqo ah. App ayaa intaa ku daray in ay u baahan tahay isagoo iCloud xogta ay uploaded in iCloud. Waxaas dabadeed, waxaa loo baahan yahay qalab loogu iCloud inuu keeno isbedel iyo iyaga loo farsameeyo.
Caddadka # 2: Arrinka Iyadoo Microsoft Outlook
Fadlan la soco in iCloud taageertaa kaliya Outlook 2007 oo Outlook 2010 Haddii aad u isticmaaleysaa hadda Office 2013, ma shaqeynaayo.
Caddadka # 3: iCloud Drive Arrimaha
Laga soo bilaabo dhexdhexaad kaydinta aan la arki karin isticmaalaan barnaamijyadooda iyo horumarinta, Apple dhawaan la casriyeeyay iCloud in boosteejo ah oo loogu talagalay daruur oo kale Google Drive ama WordPress lagu kaydiyo. Nasiib daro, guurka dhibaatooyin ku keeneen qaar ka mid ah dadka isticmaala.
Caddadka # 4: iCloud fayl ma ballaarin doonto
Mawduucyada waxaa ka mid ah fayl aan la kordhin karaa; fayl ma loo furi karo, iyo macluumaadka la kaydiyo oo aysan furi karin. Dad badan oo loo isticmaalo iCloud inay dajiyaan Bookmarks ka Mac. Dhamaan fayl bookmark ku jiraan, laakiin inta badan dadka isticmaala ma ka heli karaa fayl ah si loo ballaariyo labada by double-magcaabo ama ay xaq u-ilamaha oo riixaya "ballaariyo". Arrinta ay sabab u ahayd browser internetka ah iyo qaabeynta Windows oo ay taageerayaan iCloud.
Caddadka # 5: Instant Search aanay helin dhinacyada oo dhan
Marka raadinta dagdag ah ma heli beeraha marka aad baadhaan xogta ee iCloud, xaqiijiyo iCloud in ay awood u raadinta.
Caddadka # 6: Documents maqan Away
Document A maqan gudahood X OS waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee la iCloud. Intaas waxaa sii dheer, dad badan ayaa sidoo kale la kulmay barnaamijyadooda ama barnaamijyada la sameeyey si toos ah u hagaagsan Apple ee. Iyada oo nooc file qaarkood sida diridda ama Pages, tani waa uu fiican yahay. Nasiib daro, waa wax aad looga xumaado, waayo, wax kasta oo kale. Nasiib wanaag, waxa jira fursado badan oo ka jira in ay helaan files kuwa dhibaato la'aan.
Caddadka # 7: saxiixin karaa in iCloud on Mac sabab u heegan ah oo sheegaya in cinwaanka email aan la xaqiijin.
Dadka intooda badan ma saxiixi karo sababtoo ah heegan "xisaabta ma xaqiijin -. Hubi email u tilmaamo cadaynaya account" Si loo xaliyo arintan, waa in aad marka hore u dhow iyo furan iCloud ka hor inta aadan isku dayin inay la soo wareegto-in si iCloud. Labaad, haddii aysan xal u helidda dhibaatada, isku day in aad hubiso folder aad junk ama folder email si loo xaqiijiyo email loo diray ka Apple ah. Haddii aad la kulanto xaqiijinta lahayn email in folder aad junk ama folder email, isku day in aad guji badhanka jeeg Email Kitaabkiisa iCloud door bidaan.
Caddadka # 8: saxiixin karaa in iCloud on Mac sabab u ah codsi sugida ah.
Haddii aad hadda soo food saartay dhibaato codsi sugida, xaqiijiyo haddii OS X account user ayaa mudnaanta maamulka. Haddii aad qortey sida user a heerka aan mudnaanta maamulka in ay jirto, waa wax macquul ah in aad ka heli kartaa heegan sugida ah in dhigayaa: ". Rabtid System waxa uu isku dayayaa inuu wax ka beddelo qaabeynta Services Directory" Si loo xaliyo arrintan, geli username maamulka iyo password si ay awood rabtid System in la beddelo goobta.
Caddadka # 9: La Helay "username ku guuldareystay ama password" markii uu isku dayay inuu la soo wareego ugu iCloud.com
Si loo xalliyo dhibaatada, geli ID oo dhan Apple saxiixayaan ee The qalad ugu badan waa.,
• Haddii ID Apple dhameystiran yahay username@me.com, ha iloobin in aad ku qor ama talooyin wax oo dhan. Ha isku dayin inay la soo wareegto in kaliya "username". Hubi in Caps muhiim ah Lock waxaa u suurta sababtoo ah dhammaan usernames iyo sirta aad u xasaasi ah.
• Hubi in aad isticmaasho sax ID Apple iCloud-xiriira oo aan kale ama IDs kala duwan loo isticmaalo. Haddii aad leedahay wax ka badan hal ID Apple, isticmaal ID Apple ee adeegyada Apple.
• Booqo ee iforgot.apple.com, ka dibna dib sirta ID Apple haddii loo baahdo.
Caddadka # 10, anigu ma dooran kartaa gurmad iCloud ah ay sabab u kaydinta ku filnayn
Waxaa jira marar meesha laga yaabaa hayaan iCloud inuusan diyaar u noqon qalab macruufka. Qofka ugu horeeya ee suurogal ah in aad ku guuldareystay inuu hayaan iCloud ah u qalab aad si guul leh. Second waa xaqiiqda ah in qalab aad isticmaashaa version macruufka hore ka badan waxa aad sida ugu dhaqsaha badan aad u dhigay gurmad loo isticmaalo. Saddexaad suurogal ah in aad sameeyey oo kale, ama aad ku leedahay xisaabta ka duwan iCloud. Ugu dambeyntii, waa macquul in aad aan xoojiyaa 180 maalmood gudahood ah.
Apple ayaa haatan la xariirta ay xaaladda nidaamka page in ay sii wadaan xalinta arrimaha 11 adeegyada iCloud la xiriira. Adeegyada waxaa ka mid ah waraaqaha daruurta, Back to My Mac, kaabta iCloud, iCloud Account & Saxiix In, iCloud Drive, iCloud Mail, iCloud Keychain, iMovie Theater, Photos iyo Raadi My iPhone, iPad, iWork u iCloud Beta, iPod taabashada iyo Mac.
> Resource > iCloud > Waxa Aad Sameyn Karto la Arrimaha iCloud on iPhone